Food Pick-up Sites will be CLOSED on Friday, July 3 in observance of Independence Day.
Culinary & Wellness Services > Free Food Boxes for Children > Cunnada carruurta inta ay xiran tahay
Waxaan siineynaa cunto bilaash ah DHAMMAAN carruurta, 18 sano iyo wixii ka yar, inta ay dugsiyadu u xiran yihiin COVID-19. Dhammaan qoysaska waa la soo dhaweynayaa inay ka qeybqaataan barnaamijkan. baakadaha cuntada ee toddobaadlaha ah ayaa la heli karaa maalmaha Isniinta-Jimcaha laga bilaabo 10-2. Waxaan laga heli karaa ilaa iyo toban meelood oo kala duwan maalin kasta, waxaan ugu diyaarinaynaa qoysaska konton goobood oo laga soo qaado Minneapolis oo dhan inay ka xushaan usbuuca oo dhan. Ka raadi baska dugsiga Jaallaha ah dhammaan meelaha wax laga soo qaado ee MPS! Si qoysaska iyo shaqaalaha loo badbaadiyo, waxaan bixinnaa soo-qaadis qandaraas-la’aan ah.
Sanduuq ama baakad kasta oo cunto ah waxaa ku jira walxo afar iyo toban cunto ah - toddobo quraac iyo toddobo qado. Qoysaska waxaa lagu soo dhaweynayaa inay qaataan hal sanduuq ilmo kasta, usbuucii. Liiska cuntada ee toddobaadlaha ah, oo ay ku qoran yihiin tilmaamo iyo sidii loo kuleyln lahaa oo fiidyow ah, ayaa laga heli karaa bogga websaydhka. Alaab badan oo cunto ayaa u baahan qaboojiye. Cunno dheeri ah ayaa loo heli karaa qoysaska iyadoo lala kaashanayo story Sheridan halka sahayda ugu dambeysa ay jirto.
Su'aalaha Soo Qaadashada Cuntada iyo Jawaabahooda
Isku day Khariidadeena Google oo leh meelaha goobta ku yaal.
Dugsi Waite Park , Hiawatha School , Edison HS , Andersen School , Hale School , Olson Middle , Farview Park , Laney School , Whittier Park , Bancroft School
Bottineau Park , Beltrami Park , Cityview School , Seward School , Dugsiga Cagaaran , Dugsiga Jenny Lind , Guriga Martida , MLK Jr. Park , Bossen Field , Phillips Park
Northeast Athletic Field Park, Marcy School , Anwatin School , Hmong School , Dugsiga Folwell , Lyndale School , Keewaydin School , North Commons Park , Iskuulka Longfellow , Peavey Park
Audubon Park , Elliot Park , Webster School , Bethune School , South HS , Iskuulka Windom , Mastery School , Minneapolis PAL , Jefferson School , Sanford School
Harrison Park , Pratt School , Henry HS , Hall Hall , Waqooyi-bari , Roosevelt HS , Folwell Park , Bryant Square Park , Sullivan School.
Goobaha Gawaarida Cunnada Maalinlaha ah
Meesha Maryan, 401 North 7th St, 10: 00-10: 45 am
Xarunta Brian Coyle, 420 S. 15th Ave., 11:15 subaxnimo - Duhur
Macluumaadka degmada kale, fadlan booqo cws.mpls.k12.mn.us/covid_response
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo (FAQ)
Sidee barnaamijkan cuntada loo maamulaa loona maal galiyaa?
MPS CWS waxay si aad ah ugu hawlan tahay inay siiso cunto bilaash ah oo loogu talagalay dhammaan carruurta, 18 jir iyo wixii ka hooseeya, inta lagu gudajiro iskuulku COVID-19. Waxaan awoodnaa inaan ku bixinno raashinkan Barnaamijka Cuntada Xagaaga ee loo aasaasay si loo hubiyo in carruurtu ay sii wadaan helitaanka cunnooyin nafaqo leh marka iskuulku uusan ka qeyb galeynin. Waaxda Beeraha Mareykanka (USDA) ayaa maamusha barnaamijkan waxayna siisaa magdhaw MPS CWS cuntooyinka aan u adeegno. Dhammaan qoysaska waa la soo dhaweynayaa inay ka qeybqaataan barnaamijkan.
Ma jiraan wax kharash ah oo ku baxa cuntadan?
Wax kharash ah oo ku baxa adeegga cuntadan ma jiro.
Ayaa u qalma inuu helo cuntadaan? Ilmahaygu ma u baahan yahay inuu noqdo MPS arday?
Sanduuqyada cuntada ee MPS waxaa heli kara dhammaan dhalinyarada, 18 sano ama ka yar. Ilmuhu Uma baahna inuu ka diiwaangaliyo MPS si uu u helo sanduuqa cuntada.
Miyaan cuntada u qaadan karaa dadka waaweyn ee qoyskayga mise waa kuwan keliya carruurta?
Maya, cuntada waxaa loogu talagalay carruurta da'da iskuulka iyo dhalinyarada 18 sano iyo ka yar. ("Caruur" waxaa loola jeedaa shakhsiyaad 18 sano jir ah ama kayar waxaana ku jira dad ka weyn 18 sano oo loo go'aamiyay inay u qalmaan adeegyada kumeelgaarka ah ee Waaxda Waxbarashada Minnesota.)
Cunnugaygu ma inuu joogaa markii aan cunnada karinayo?
Haddii cunugga uusan joogin karin marka uu qaadanayo sanduuqa cuntada - waalid, mas'uul, ama walaalkiis waxay cunno u soo qaadan karaan cunugga aan joogin. Qofka weyn ama walaalaha waa in ay diyaar u ahaadaan in ay muujiyaan caddeynta ilmaha aqoonsigiisa. Foomamka aqoonsiga waxaa ka mid noqon kara: kaar aqoonsi dugsi kasta, kaarka warbixinta dugsiga, diiwaannada xarunta daryeelka ilmaha, ama caddeyn dhalasho.
Miyaan haystaa ikhtiyaar cunno?
Maya. Sanduuq cunto ah ayaa la siin doonaa qof kasta oo jira 18 sano ama ka yar.
Cunnadani ma la heli doonaa inta lagu jiro usbuuca dhammaadka, sidoo kale?
Sanduuqyada cuntada looma heli karo soo qaado sabtida iyo axadaha, laakiin sanduuq walba waxaa ku jira cunno loogu talagalay cuntooyinka isbuuc dhammaadka - toddobo quraac iyo toddobo qado. Cunno dheeri ah ayaa sidoo kale laga heli karaa goobaha cuntada lagu qaado ee qoysaska loogu talagalay iyadoo lala kaashanayo The Sheridan Story , iyadoo sahaydu ugu dambeysey.
Halkeen ka heli karaa macluumaad nafaqo oo ku saabsan cuntadan?
Fadlan eeg bartayada internetka , oo ay ku jiraan liiska dhammaan walxaha cuntada iyo waxyaabaha ku jira. LINK
Ma jiraan fursado kale oo loogu talagalay carruurta leh xasaasiyadda cuntada?
Sanduuqyada cuntada ee MPS ma leh hilibka doofaarka, looska, khudradda geedka, kalluunka, ama kalluunka qolofta leh ee qolofta leh. Haddii ilmahaagu u nugul yahay caano, ukunta, soy, ama qadka MPS waxay sameyn doonaan dadaal kasta si ay ula jaan qaadaan xulashooyinka kale. Fadlan emayl ku dir Ask.Dietitian@mpls.k12.mn.us si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Maxay yihiin ilaha kale ee cunnada ee jira?
Magaalada Minneapolis waxay leedahay khariidad is dhexgalka oo ku saabsan goobaha cuntada lagu diyaariyo ee magaalada oo dhan.
MPS miyey aqbashaa tabarucaada cuntada? Ma ugu deeqi karaa cunnada meelaha laga qaato cuntooyinka?
Maya. MPS ma aqbalayso tabarucaada cuntada. Fadlan la xiriir rugta cuntada ee deegaankaaga wixii ku saabsan cuntada iyo / ama tabarucyada lacageed. Waxaad sidoo kale ka fiirsan kartaa inaad ku tabarucdo AchieveMPLS magaca bulshada dugsiga aad rabto inaad taageerto ama u muujiso "Adeegyada cuntada kulul "Caafimaadka iyo fayo-qabka - COVID".
Miyaad awoodaa inaad bixiso soo-qaadista bilaa-xiriir?
Haa! In kasta oo goob kasta ay u shaqeyso si kaladuwan oo ku saleysan booskooda, qoysaska waxay awoodaan in ay ka soo qaataan sanduuqyadooda miis ama ay kor ugu qaadaan gaarigooda si ay u helaan sanduuqyadooda. Markaad baabuur wado, fadlan u dhowow baska agtiisa. Haddii aad furatid jirridada, shaqaalaha ayaa sanduuqaaga gelin doona jirridda. Shaqaalaha waxaa lagu faray inaysan sanduuqyada toos u dhigin gaariga. Waad ku mahadsan tahay gacan ka gaysashada joogtaynta lix fiit oo ah jahawareerka bulshada wakhti kasta.
Sanduuqgayga cuntadu wuu ka duwan yahay cuntada aan ku soo arkay websaydhka ama fiidiyaha. Sabab?
Waxyaabaha saxda ah ee ku jira santuuqa cuntada way kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran jiritaanka shay. Mararka qaarkood saadka, gaarsiinta cuntada, ama arrimo kale ayaa keena daqiiqda ugu dambeysa ee beddelaadda. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga.
Maxaa kudhaca cuntada aan loo imaan in laqaato? Miyaa latuura mise khaanad ayaa lugu celiya?
Waxaan leenahay siyaabo farabadan oonu uga hortagno cunta silcinta. Xiliga cunta qaybinta darawaliinteenu waxay cuntooyinka kasoo qadaan meelaha cunta badani taalo waxay geeyaan meelah aadka looga baahanyahay. Waxaanu kufarsanahay inay tahay inaysan ilaayo hada wax cunta ah oo soo hartay oo latuurayo inaysan jirin. Waxaanu xiriir laleehanay meelo kale oo haday wax cunta ahi nagoo harto aanu siinkarno. Balse weli mahayno wax cunta ah oo nagasoohara. Waxaan booqan kartaa shaashadeena si aad ugu barato kahortaga cunta silcinta cws.mpls.k12.mn.us/true_food_no_waste
Goobaha ku taxan ayaa leh raashin laga heli karo magaalada:
Iyada oo la dhawrayo ciidaha Maalinta Madax-bannaanida, dhammaan goobaha sanduuq qaadista waxaa lagu xirayaa Jimcaha, Luulyo 3. Fadlan qorsheyso inaad soo qaado sanduuqaaga toddobaadlaha cuntada maalin kale oo la beddelayo.
MPS ilaha qoyska
Gaajada waxay saamayneysaa wada-hawlgalayaasha
Cunno bilaash ah oo loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 18 sano iyo wixii ka yar ayaa ku arki kartaa hal gujin oo kaliya. Barnaamijka cuntada ee loo yaqaan 'Cunnada Cunnada Bilaashka ah ee Caruurta' ee loogu talagalay qoysaska inay ka caawiso qoysaska sidii ay u heli lahaayeen ugana heli lahaayeen cunno bilaash ah goobaha ku yaal gobolka Minnesota oo dhan. Barnaamijkan bilaashka ah wuxuu muujinayaa meelaha cuntada laga soo qaado oo leh maalmo iyo saacado la qaybiyo, wuxuuna ka caawin karaa qoysaska inay helaan goobaha ugu dhow. U soo degso iOS ama Android.
U soo degso iOS ama Android appka eh.
SITES CUNTADA CUNTADA
Qoysasku hadda waxay cunno ugu soo qaadan karaan carruurtooda goobahan dheeriga ah Isniinta ilaa Jimcaha. Raadi RED CUNTADA RED!